कब्जियत छ ? हटाउने यस्ता छन् उपाय | Hamro Patro
बिहानको ०९ : १०
कब्जियत छ ? हटाउने यस्ता छन् उपाय
हाम्रो पाचन प्रणालीले धेरै कुरा शरीरबाट निष्काशन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पानी धेरै पिउने, पानीले पाचन प्रणालीलाई निष्काशन गर्नुपर्ने विकार वा फोहर बाहिर निकाल्न सघाउँछ भने कतिपय अनावश्यक र बढी खनिज तथा भिटामिन निष्काशनमा पनि सघाउँछ ।
बिहान शौचालय जानु केही बेरअघि एक गिलास मनतातो पानीमा एक चिम्टी नुन हालेर पिउने र दुई मिनेट हलुका व्यायाम गर्ने । यसले पनि पेट सफा गर्न सघाउँछ।
कब्जियत छ भनेर शौचालय जान बन्द नगर्ने । जति बेला दिसा लागेजस्तो हुन्छ वा नलागे पनि सधैं शौच जाने समयमा शौचालय जाने । साथै पेट सफा हुन जति समय लागे पनि समय दिने । कहिलेकाहीँ यी नै उपायले पनि कब्जियत कम हुनसक्छ भने कतिपय अवस्थामा नहुन पनि सक्छ । त्यस्तो बेला कब्जियत हुने कारण पत्ता लगाउनु पर्ने हुनसक्छ ।
पेल्भिक मांसपेशीको व्यायाम
कहिलेकाहीँ मलमुत्र निष्काशन गर्ने मांसपेशीले राम्रोसँग काम गर्न नसक्दा पनि कब्जियत हुने गर्छ । यस्तोमा फिजियोथेरापिस्टले पेल्भिक मांसपेशीको व्यायाम गर्न सिकाउँछन् । व्यायामले ती मांसपेशीलाई फेरि सक्रिय पार्छन् र पेट सफा हुन थाल्छ । पेल्भिक मांसपेशीको व्यायामलाई ‘बायोफिडब्याक’ भनिन्छ । यसमा मेसिनको सहायताले व्यायाम गराइन्छ ।
यी सबै उपायले पनि कब्जियत हटेन भने चिकित्सकले दिसा पातलो बनाउनेलगायत विभिन्न औषधि प्रेस्क्राइब गर्छन् ।